Canonical Inopa Ubuntu Phones kuUBports kuenderera Ubuntu Kubata Kubudirira | Linux Vakapindwa muropa
Ubuntu Touch yaiita kunge yakafa, asi ikozvino zvinoita sekunge Canonical yakapa nhare mbozha nhare neUbuntu Runhare kune iyo Vanogadzira UBports, ivo vakazvisimbisa ivo pachavo pane yavo yepamutemo Twitter account. Saka ivo havazi makuhwa, asi chokwadi chakaratidza. Chii chiri chinangwa chemupiro uyu? Zvakanaka, zvese zvinoratidza kuti Canonical haidi kukanda tauro rekubatana pamwe nekuvandudzwa kweUbuntu Kubata kwayo zvisinei nezvingaite sekufamba kwazvino, nekuti neichi chiito kukura kweiyo inoshanda sisitimu yezvigadzirwa ichaenderera nemasaira.
Canonical haichashandisi echimurenga Kubatana 8 girafu girafu yaive yakagadzirirwa kuunza iko kusangana uye zvimwe zvakawanda zvinowedzeredzwa, pamwe chete nehurongwa. Ubuntu Bata inoshandiswa nemamwe mafoni emafoni uye matafura akafanana neaya anobva kuMeizu, BQ, nemamwe makambani. Zvakanaka, pane zvimwe zvezvigadzirwa izvo vakomana veCanonical vakachengeta izvo zvakapihwa timu yeUBports yekuvandudza, uye ivo vari kugadzirisa Ubuntu Kubata, kuichengeta, kuivandudza, kugadzirisa iyo kodhi yayo kuti iwedzere mashandiro matsva uye iyo mobile operating system usafe. Saka iri imwe nzira kune avo vanoda chimwe chinhu chisiri Android kana iOS ...
Zviteshi zvinogamuchirwa kubva kuCanonical zvave zviri izvo BQ Aquaris E5 HD, uye Meizu MX4 ayo zvino akabatwa neUBports, inotungamirwa naMarius Gripsgård. Muchokwadi akasimbisa kuti chinangwa ndechekuvandudza Ubuntu Kubata, kunyangwe akasimbisawo kuti mafoni akapihwa anoshandisa Android, asi kuti vanoronga kuagadziridza neshanduro yeUbuntu Kubata kuti vaedze uye vaenderere mberi nekuvandudza, nekudaro kutambanudza rutsigiro rweavo.vachine mudziyo neiyi system uye vachida kuramba vachigamuchira nhau.
Chiverengero cha 38 yakapa nhare izvo zvinofanirwa kukwana nekuda kwechinangwa ichi, uye ivo vanogona kunyange kugadzirisa iyi nyowani vhezheni yeUbuntu Kubata kune mamwe ma terminals akasiyana neMeizu neBQ, kunyangwe maROM aya asingawanikwe kune mamwe mabrands panguva ino. Uye sekuziva kwako hachisi chinhu chega icho UBports iri kuyedza kumutsidzira, vanoshandawo nesimba kuti vaenderere mberi nazvo kubatana 8. Zvinotaridza kuti vafunga kupa hupenyu kuzvirongwa zvese zvakarambwa neCanonical ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Canonical inopa Ubuntu mafoni kuUBports kuti ienderere mberi Ubuntu Kubata kukura
Mhoro, netsaona, ubuntu hwakaiswa pamafoni (4)? Ndatenda nekundipindura ..
Unoziva sei iwe kuti pane mafoni makumi matatu nemasere akapihwa?